Cudurrada Galmada iyo Cudurrada Galmada La isugu Gudbiyo - Hay'adda Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Cudurrada Galmada iyo Cudurada Galmada la isugu gudbiyo
Cudurada galmada la isugu gudbiyo (STI), sidoo kale loo yaqaan sida cudurada galmada lagu kala qaado (STD) iyo cudurrada galmada (VD), waa infakshyo badanaa ku faafa galmada, gaar ahaan galmada dumarka, galmada dabada iyo galmada afka. Cudurada STIs intooda ugu horreysa ma keenaan astaamo. Tani waxay keeneysaa khatar aad u weyn in cudurka loo gudbiyo dadka kale.
Porn wuxuu leeyahay laba door oo kala duwan sida aan uga fekereyno nolosheena jinsiga ah waxay yeelan kartaa cawaaqib caafimaad.
Marka hore, haddii aad daawaneysid porno iyo siigaysiga, laakiin aadan la galmoonaynin qof, waad ka badbaadi kartaa inaad qaaddo wax STI ah oo faafa. Tani gabi ahaanba waa run, laakiin ma ahan sheekada oo dhan. Weli waad u nugul tahay dhibaatooyinka caafimaad ee la barto halkii aad ka qaadi lahayd cudurka. Haddii aad tahay nin, adoo daawanaya waxyaabo badan oo porno ah waxaad wali naftaada u soo bandhigeysaa dhibaatooyinka mustaqbalka fog ee leh cillad aan caadi aheyn (PIED), anorgasmia ama dheecaan soo daahay. Haddii aad tahay haweeney aragtidaada porn-ka ah waxay u tababbari kartaa jirkaaga inaad doorbiddo alaabada lagu ciyaaro ama galmada si aad uhesho saaxiibtinimada dhabta ah. Daawadeyaasha lulataaye culus ayaa si jimicsi ah ugu tababbaraya isboorti qaldan.
Marka labaad, adigoo daawanaya porn, waxaad maskaxda ku tababareysaa rabitaanka galmadaada inaad rabto inaad ku celiso waxa aad ku aragtid porno. Caadi ahaan inta badan muuqaalka porn waa goob aan condom lahayn. Tani waxay muujineysaa rabitaanka maskaxdaada inaad iska indhotirto cinjirka galmada ama caqabadaha kale ee jidhka sida dhoobada ilkaha marka la galmoodo afka.
Nidaamyada galmada amaanka ah sida isticmaalka cinjirka galmada, oo leh tiro yar oo lamaanaha galmada ah, iyo in xiriir la leeyahay qof kasta oo kali ah oo galmo la yeesho kan kale ayaa hoos u dhigaya khatarta. Dilaaga ugu weyn waa HIV iyo HPV. Halkan waxaa ku qoran macluumaad aasaasi ah oo ku saabsan.
Fayruska 'immunodeficiency virus' (HIV) ayaa keena Cudurka HIV iyo waqti ka dib helitaanka cudurrada difaaca jirka (immunodeficiency syndrome) (AIDS). HIV waa mid ka mid ah cudurrada ugu dhimashada badan ee adduunka, lambarka darajada 2 ee liiska cudurrada faafa ee Ururka Caafimaadka Adduunka. 2014 waxa ay ku dishay 1.4 milyan qof waxayna ku saabsan tahay 35 million dadka kale waxay la joogeen. Waddanka Maraykanka ku saabsan 1.1 million qof ayaa qaba, laakiin qiyaastii sideed-kii ma yaqaanno, taas oo ka dhigaysa khatar aad u sareysa marka la eego gudbinta cudurka.
Human Papilomavirus ama HPV waa fayraska DNA-da ee yar yar oo ku faafa maqaarka iyo qoyaanka qoyan ee jidhka sida afkiisa, siilka, afka ilmo-galeenka iyo futada. Waxaa jira wax ka badan 100 noocyada kala duwan ee HPV. Noocyada ugu caansan ayaa laga helaa maqaarka waxayna u muuqdaan sida burooyinka loo arko gacanta. Qaar ka mid ah noocyada HPV waxay sidoo kale ku dhacaan meelaha xubnaha taranka ee raga iyo dumarka. HPV-ga ayaa xubin ka ah HIV-ga iyo caalamka oo dhan. Waxaa jira ugu yaraan noocyada HPV-ka ee HPV ee saameyn kara meelaha xubnaha taranka. Qaar ka mid ah kuwani waa "khatar hoose" oo keena burooyinka xubinta taranka iyadoo "noocyada halista badan" ay sababi karaan kansarka ilmo galeenka ama noocyada kale ee kansarka xubinta taranka. Noocyada HPV-ga ee ugu sarreeya ayaa sidoo kale keeni kara nooc ka mid ah kansarka dhuunta, oo loo yaqaan kansarka oropharyngeal, kaasoo noqonaya mid aad ugu badan Maraykanka iyo Yurub.
Fayrasyada HPV ayaa muddo dheer la ogaaday inay joogaan aagga xubinta taranka iyo inay noqdaan sabab weyn oo ah dhuunta ilmagaleenka, jilicsanaanta, galmada, iyo kansarka dhalmada. Waxaa la rumeysan yahay in tirada dadku kordheen ay ku hawlan yihiin dhaqdhaqaaqyo jinsi la leh lamaanayaal badan oo ku lug leh hababka galmada afka ah iyo natiijada waxay ku dhacdaa HPV ee gobolka iyo luqunta qoorta, taas oo keeneysa in ka badan heerka kansarka oropharynx. Hordhac faahfaahsan ee HPV ayaa laga heli karaa halkan.
Waxaa jira dhowr cudur oo kale oo STIs ah oo aan u badneyn inay noqdaan cuduro dilaa, laakiin wali way ku xun yihiin caafimaadkaaga. Marna ma aha fikrad fiican in qof kale loo siiyo cudur!
Haddii aad galmo ahaan firfircoon tahay, helitaanka talo ama taageero ka timaadda xirfadlayaasha caafimaadka galmada had iyo goor way caqli badan tahay.
Magaalada Glasgow waxaan kugula talineynaa Sandyford, oo sidoo kale bixiya adeegyo takhasus u leh khaniisiinta iyo ragga labadaba Mashruuca Steve Retson. Gudaha Edinburgh waa dadka u tagaan Caafimaadka Galmada Lothian.